Chine Glass Cover Door Kinzon35 orinasa sy mpamatsy | Kinzon
Rafitra Famoronana balkonina Kinzon06
Rafitra Famoronana balkona Kinzon09
Fitaratra fitaratra vera Kinzon35
Varavarana amoronana vera-Kinzon35 dia mombamomba ny onitra izay afaka manitsy ny elanelana eo anelanelan'ny rafitra sy ny valindrihana. Rehefa mihetsika ny fehin-kibo hidin'ny sisiny napetraky ny rafitry ny varavarana, ny vavahadin-tsorom-baravarana fitaratra-Kinzon35 dia manetsika rafitra iray izay manosika ny takelaka rehetra, manery azy ireo. Varavarana amorom-baravarana -Kinzon35 dia afaka mametaka takelaka fitaratra 9 amin'ny lafiny iray ary mampiasa fitaratra misy vera 5 + 6A + 5. Varavarana amoronana fitaratra-Kinzon35 dia manana endrika famolavolana manokana mba hialana amin'ireo takelaka fitaratra izay mianjera rehefa misokatra izy ireo.
Varavarana amoronana fitaratra-Kinzon35
Ny varavarana fitaratra vera-Kinzon35 dia manana mombamomba ny onitra izay afaka manitsy ny elanelana eo anelanelan'ny rafitra sy ny valindrihana. Rehefa mihetsika ny fehin-kibo hidin'ny sisiny napetraky ny rafitry ny varavarana, ny vavahadin-kafatra am-baravarana fitaratra-Kinzon35 dia manetsika mekanika iray izay manosika ny takelaka rehetra, manery azy ireo. Ny vazaha vita amin'ny zaridaina Kinzon35 dia afaka mametaka takelaka fitaratra 9 amin'ny ilany iray ary mampiasa fitaratra roa 5 + 6A + 5. Ny felana vita amin'ny zoron'ny kinzon35 dia manana endrika famolavolana manokana mba hialana amin'ireo takelaka fitaratra na mianjera rehefa misokatra izy ireo. Ny zaridaina vita amin'ny kinzon35 dia afaka mihetsika tsara na dia ny tontonana fitaratra aza dia mihetsika ao anaty lavaka fanokafana ary tsy mitsambikina ireo andiana. Ny varavarana fitaratra vita amin'ny vera-Kinzon35 dia mampiasa vy matevina ho an'ny famaky manokana sy kodiarana mitondra baolina. Ka ny haben'ny maxima an'i Kinzon35 dia 850mm * 3000mm isaky ny takelaka fitaratra.
Ny varavarana amorom-baravarana-Kinzon35 dia miaro ny lavarangana amin'ny vovoka sy ny orana ary koa ny rivotra sy ny tabataba rehefa manome alàlan'ny faran'ny taona ny lavarangana. Ny varavarana amoronana fitaratra-Kinzon35 dia manana mekanika fanidiana tsotra izay ahafahana mampiasa ny singa fitaratra manakaiky ny ilany amin'ny vavahady fidirana izay azo apetraka amin'ny toerana telo samihafa. hanafaka ny lavaka mampatanjaka rehetra.
Varavarana amoronana vera-Kinzon35 dia vokatry ny fivoarana vokatra maharitra sy ny fanandramana mpampiasa efa am-polony taona maro. Isaorana ireo mpanjifa afa-po iray tapitrisa mahery avy amin'ny firenena 40 mahery, Kinzon35e dia lasa iray amin'ny varavaran'ny fiforonana be mpitia indrindra eran'izao tontolo izao. Ny kalitao tsy miovaova sy ny fampandrosoana maharitra ny vokatra dia tena nandoa vola. Varavarana amoronana vera-Kinzon35 dia aseho amin'ny endrika kanto, faharetana ary fahatsaram-panahy.
Previous: Rafitra Famoronana balkonina Kinzon06
Manaraka: Rafitra Famoronana balkona Kinzon08
Rafitra Famoronana balkasy
Rafitra mifanentana amin'ny balkara
Rafitra Famoronana fantsom-bavaha tsy misy fotony
Door Sliding Kinzon35
Aluminum Door Kinzon35